Sistemụ akụ na ụba Synchronous FM - CZH / Fmuser Fm Transmitter China Nyetụrụ Kpọtụrụ: lanyue whatsapp: +86 13602420401 SKYPE: lanyue99991
home » News » Sistemụ Mmemme FM nke akụ na ụba
Sistemụ Mmemme FM nke akụ na ụba
:Bọchị: 2019-10-16 / Atiya: News
Mkpokọta FM na-emekọrịta, na-ebugharị / mekọrịta FM nnyefe, nnyefe FM oge - synchronous, otu oge FM / redio:
A FM Single Frequency Network bụ netwọ mgbasa ozi ebe ndị ntụgharị FM dị iche na-ezipụ ụda ya n'otu oge ma nwekọrịta ọge. Netwọọkụ mgbasa ozi dijitalụ dịka DVB-T / T2 yana analog AM na redio redio netwọk nwere ike rụọ ọrụ otu a. Uru nke SFN bụ iji rụọ ọrụ ngwa ngwa ọfụma, na-enye ohere ka ebugharị ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke redio na ihe omume TV. Ihe atụ nke teknụzụ a bụ ogologo oge redio na-emekọrịta sịnịma FM na-aga n'okporo ụzọ awara awara.
Otu ihe ịma aka maka ọrụ zuru oke nke usoro dị otú a bụ ezigbo nkwekọrịta na mmekọrịta oge (nkwupụta ụda, nnyonye anya) nke mgbaama ga-ebunye.
Ndị na - agbasa ozi n'ụwa niile na - eji ụdị nkesa ọdịnaya dị iche iche (ASI, E1, satịlaịtị, IP) iji meziwanye redundance, ka ọ nwekwuo mgbanwe na ichekwa ego.
Nri mgbasa ozi ọ bụla na nnyefe FM, ọbụnadị oriri na-arụ ọrụ nke ọma site na E1, na-arụpụta igbu oge. Mpempe akwụkwọ edozighị emebi na-egbu oge na ntanetị IP-J (ndepụta) ma ọ bụ nri satịlaịtị nwere ike ibute na-egbu oge nke na-eme ka mmekọrịta FM dị iche na-agbakọwanye agbakọ.
Njikọta Ngwọta usoro na-eme ka mgbaaka gị nwee ike jikọtara ọnụ n'ụzọ ụzọ onyinye ntanetịkị FM-SFN.
Justkwesịrị ịgbakwunye ihe ntinye System ọzọ na ntanetị nnyefe gị na iji nye akara ngosi 1pps n'ụlọ ọrụ niile. Ọkachasị onye nnata / ihe nlele na-enyocha akara ndị ahụ ma na-emekọrịta ụda Igwe a na Stereo na RDS Encoder. Ọ nweghị ọdịiche ọ bụla ụdị nkesa a na-eji E1, IP ma ọ bụ satịlaịtị ma ọ bụ ọ bụrụ na a na-ahọrọ otu n'ime ndepụta ndị a maka ebumnuche nkwado ọ bụla. Nke a bụ ihe dị oke mkpa maka mbufe SFN n'ihi na mgbaala ụgbọ elu emeworị ka ịmekọrịta.
Nzọụkwụ ndị ọzọ ga-abụ mmekọrịta nke ndị Encoders na Transmitters na-ezisa mgbaama na njedebe.
«Nke gara aga: Gịnị bụ ụkpụrụ ọrụ nke na-enye redio redio dijitalụ?
FMUSER FBE300 H.264 / H.265 Magicoder Video Audio Ihe Ntụgharị Ihe ntughari Ederede :Osote "